Is Jonathan Moyo instigating mass uprising in Zimbabwe? – The Zimbabwe Mail
HomeHeadlinesIs Jonathan Moyo instigating mass uprising in Zimbabwe?
July 10, 2020 Staff Reporter Headlines, Main, Politics 0
Zimbabwe’s ruling Zanu-PF party on Monday accused exiled former minister Jonathan Moyo of agitating for “mass uprising” in the country and called for his extradition from Kenya.
Zanu-PF secretary for administration Obert Mpofu, in a video statement released by the party, claimed opposition parties and other groups had formed an “unholy alliance” whose aim was to topple President Emmerson Mnangagwa through an uprising.
Mpofu claimed that a man had been arrested in Harare’s Kuwadzana suburb while printing Zanu-PF and Central Intelligence Organisation cards, linking the discovery to planned mass protests on July 31.